🥇 Ugcino oluzenzekelayo lwesitudiyo sokuthunga
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 912
Misela i-accounting automation yesitudiyo sokuthunga
Umbutho wesitudiyo sokuthunga yinkqubo entsonkothileyo, kuba ingxelo ethembekileyo, egqibeleleyo nekhawulezayo yemveliso yinxalenye eyimfuneko kuyo yonke inkqubo yombutho ukusuka ekusungulweni ukuya kwimveliso. Isitudiyo sokuthunga lishishini elithile elifuna inkcitho ebonakalayo yezixhobo zokusebenza: ezemali, ezabasebenzi kunye nezinto eziphathekayo, kwaye zifuna ukucwangciswa ngononophelo kunye nokucwangciswa okucacileyo. Kubalulekile ukuba uqonde ukuba istudiyo esizenzekelayo sokunikwa kwengxelo kufuneka siqale ngokulungiselela ngokucokisekileyo kunye nophando olunzulu malunga neli shishini. Isitudiyo sokuthunga sibonelela ngamathuba angapheliyo okuyila kunye nengeniso ezinzileyo. Ukumelana nokhuphiswano, kuya kufuneka ube nakho kungekuphela ukufumana izixhobo kunye nabasebenzi, kodwa ube nobuchule bokuyila iimveliso. Kwaye akukho nto ikuphazamisa ngokupheleleyo kubuchule kwaye kwangaxeshanye yonke into ithathelwa ingqalelo kwaye akukho nto ishiyekileyo, isoftware yethu, eyenzelwe umsebenzi wesitudiyo sokuthunga, yenziwa.
Ukusekwa kwengxelo yemveliso kufuna ubuchwephesha, kuba ukwenza oku kuyafuneka: ukuqinisekisa ucwangco kwisitudiyo, ukuphuhlisa iimfuno kunye nokulandelela ukuhamba koxwebhu oluphambili, ekusekweni kwengxelo zemali kunye nezinto ezibonakalayo, uhlalutyo lwezalathi lwenziwa , apho konke oku kuthathelwa ingqalelo ngohlobo lombutho wobalo - inkqubo ye-USU-Soft esizisebenzelayo yesitudiyo sokuthunga. Xa uququzelela izitudiyo zokuthunga nokwenza iimveliso, nditsho nezobuchwephesha ezinamava kunye noqoqosho abasoloko bekwazi ukubona kwangaphambili zonke izinto ezenziwayo; Nangona kunjalo, xa usenza isishwankathelo se-studio sokuthunga kunye nokusebenzisa i-USU-Soft, zonke izinto ezivelayo zinokubonwa kwangaphambili. Ekuququzeleleni umsebenzi wesitudiyo sokuthunga, kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa umsebenzi onesingqi kuwo onke amasebe, ukulayishwa kwawo okumanyeneyo kunye nokusebenza kwenkqubo yokuzenzekelayo, ekwabonelelwa nakwisicelo sethu.
Usebenzisa inkqubo ye-USU-Soft accounting, unokulawula ngokulula zonke iinkqubo zemveliso yokuthunga, ukusuka ekucwangciseni ukwenza inzuzo kwisiseko somyalelo ogqityiweyo. Kananjalo ngoncedo lwenkqubo yokugcinwa kwemali esetyenziswayo kwisitudiyo sokuthunga, ungawubona umsebenzi womqeshwa ngamnye kwaye, ngokufanelekileyo, ukwandisa imveliso kamasifundisane wakho, uyakwazi ukukhuthaza abasebenzi abaziwayo ngebhaso, nanjengoko yazi, inkuthazo yinjini yenkqubela phambili. Kwaye ukulawula icandelo elinje ngevolumetric yeendleko njengezinto ezibonakalayo, kuba indawo yokusebenzela inoluhlu olukhulu lwezixhobo (amalaphu, izinto ezincedisayo), ukusetyenziswa kwazo kuchaphazela indleko zemveliso nganye kwaye, ngokufanelekileyo, inzuzo. Kwaye inkqubo yokuziphendulela kwi-studio yokuthunga iya kukwazisa ukuba indawo yokugcina impahla iyaphelelwa zizinto, ngenxa apho i-atelier yakho iza kusebenza kakuhle kwaye ngaphandle kokungabikho kwexesha lokuphumla. Ii-odolo zabaThengi ziya kwenziwa ngaphandle kokulibazisa, oya kuthi wena kunye nabathengi bakho nivuye ngazo.
Kwinkqubo yokuzenzekelayo yokulungiselela ukubalwa kwe studio, unokugcina isiseko sedatha yabathengi, ekuvumela ukuba ubone ukuba ngowuphi umthengi owenze iiodolo ezingaphezulu. Ngokusekwe kwidatha efunyenweyo, ungabanika ngenkqubo eguqukayo yezaphulelo okanye uvuze abathengi abaqhelekileyo ngezipho, Njengoko uyazi, wonke umntu uyabathanda kwaye aba bathengi baya kuhlala bekunye nawe, nto leyo ke etsala abathengi abatsha. Imveliso yokuthunga ezenzekelayo esekwe kwiqonga le-USU-Soft system ikuvumela ukuba ubonelele ngokukhawuleza ngolwazi oluyimfuneko ukwenza izigqibo zolawulo.
Xa sithetha nge-automation ye-studio yokuthunga, kubalulekile ukuba ungalibali malunga nemfuneko yokwenza inkqubo yolawulo ibonakale ngokucacileyo. Ngenkqubo yethu yobalo yokuzenzekelayo ungazi zonke iintshukumo ezenziwa ngabasebenzi bakho, njengoko ngamnye wabo enikwa igama eligqithisiweyo kunye nokungena ukuze ungene kwiakhawunti yabo. Yiyo ke loo nto, inkqubo yobalo ye-automation isindisa kwaye kamva ibonakalise kwaye ihlalutye onke amanyathelo enziwe ngumqeshwa. Oku kuluncedo kwizizathu ezininzi. Okokuqala, uyazi ukuba leliphi inani lomsebenzi owenziwa ngumsebenzi kwaye unokubala imivuzo efanelekileyo. Okwesibini, uyazi ukuba ngubani osebenza ngeyona ndlela ibalaseleyo ukuze akwazi ukuvuza abasebenzi abasebenza nzima kwaye ke oko kunyusa ukusebenza kwabo. Okwesithathu, uyazi ukuba ngubani ongavelisiyo kwaye ngubani ongakwaziyo ukwenza imisebenzi yakhe yemihla ngemihla ngexesha. Oku kubaluleke kakhulu, kuba uyazi ukuba kufuneka uthethe nabani ukuze uphucule imeko.
Inkqubo ilungiselela ukulinganiswa kwabona bantu basebenza nzima kunye nabasebenzi abasebenza nzima kwaye inikezela ngezi zibalo ngendlela yegrafu efanelekileyo, ukuze ungachithi ixesha elininzi uzama ukuqonda ukuba ithini ingxelo. Lo mgaqo uphunyezwa kuyo yonke imiba yenkqubo yobalo ye-automation-ilula, iyakhawuleza kwaye inegalelo ekukhuleni kombutho wakho. Mininzi imibutho egqibe ekubeni ifake inkqubo ye-automation kwaye ayizisoli ngokwenza njalo! Basithumela ingxelo yabo, esiyithumele kwiwebhusayithi yethu esemthethweni. Ke, ungazijonga ngokwakho ukuba inkqubo yethu ixabisiwe kwaye iyathandwa ngamanye amashishini aphumeleleyo kwihlabathi liphela.
Zininzi izicelo ezibonelelwa simahla kwi-Intanethi. Lumka xa usenza isigqibo sokusebenzisa enye yazo, njengoko iqinisekile ukuba yinkqubo yokuzenzekelayo yobalo esemgangathweni osezantsi, ngaphandle kwenkxaso yobuchwephesha. Musa ukumangaliswa kukwazi ukuba ngoku isimahla ekugqibeleni, kuba iinkqubo ezinjalo zihlala zibiza kakhulu emva kokusebenzisa uhlobo lwayo lwedemo yasimahla. Sinyanisekile kuwe-sibonelela ukusebenzisa inguqulelo yethu yasimahla yedemo kwaye emva koko uthenge ingxelo epheleleyo, ekufuneka uyihlawule kube kanye.